Inhlanganisela Yemibala – Color Combinations
I-Gospike.net imininingwane enikeza usayizi wombala wezithombe ngokuzenzakalelayo ngemuva kokulayisha kumathuluzi wokukhetha umbala. Lapho kunzima ukuthola imibala engaphezu kwamashumi ayisishiyagalolunye, le webhusayithi inikezela ngamathuluzi wokulinganisa anembile wemibala ezithombeni. I-Gospike.net yethule ithuluzi lokukhetha umbala ofanele, futhi etholakala ngosayizi, nganoma yisiphi isikhathi nanoma ikuphi. Uma uku-inthanethi, ithuluzi lizolayisha futhi lithole usayizi wombala bese libonisa uhlu lwemibala olufunayo. Isibonelo isithombe sombala, igama lombala, usayizi wombala nokuhlanganiswa kombala. Lesi yisiza esihle. Ngoba kunemibala eminingi etholakele nosayizi. Futhi enye inzuzo ukuvela kombukiso wosayizi wemibala ngokushesha. Ngakho-ke, hlola futhi ujabulele leli sayithi ukuthola imibala ehlukahlukene.
Ngokuvamile, umbala ogqamile unikeza ukujabula nokujabulisa. Ukusetshenziswa kombala kuncike kubantu ngamunye. Njengombala osekamelweni okukholelwa ukuthi uyakwazi ukukhuthaza ukusebenza kwengqondo nangokwengqondo. Uma umbala ufanelekile futhi uwuthanda umbala, lokhu kungaba nomthelela ekwandeni kwamakhono akho wokuhlaziya. Umbala unemiphumela eminingi kulokhu kuphila nasemqondweni wethu. Ekusetshenzisweni kwezinhlobo ezahlukahlukene zemibala, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka imvamisa ihlotshaniswa nobuchwepheshe nokuthenjwa. Ngaphezu kwalokho, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ingenye yemibala eyisisekelo futhi ingakwazi ukuhlangana neminye imibala, isibonelo, ukuhlanganiswa kombala okuyisisekelo uma imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ithululelwa ngomunye umbala osisekelo onjengemibala ephuzi ngakho-ke imiphumela iyimibala eluhlaza. Mhlawumbe, yilesi sizathu esenza le mibala yathandwa. Ngakho-ke, lo mbala kufanelekile ukuwusebenzisa egumbini. Ngaphandle kokuhlanganiswa okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-beige ne-brown kubuye kube yimibala eyintandokazi yabantu abaningi, basebenzisa imibala odongeni lwabo. Futhi manje, umbala othambile futhi udumile ikakhulukazi kubantu abasha. Ngaphandle kwemibala eyisisekelo, inhlanganisela yemibala kanye nesondo lemibala eliba okuqukethwe okukhethekile kule webhusayithi, kunezinhlobo ezahlukene zemiklamo yendlu nokudweba nakho kuyathakazelisa kunombala. Ngoba, kusuka kwimibala eyisisekelo nemibala ehlanganayo enikezela ngale webhusayithi, singafaka imibala odongeni, ifenisha noma ukupenda. Kule webhusayithi, okuningi kwe-Interior Paint kanye ne-Design Yangaphandle ongakuthola noma ukukulanda. Imibala eminingi yopende odongeni ingenza ikhaya lakho lihle futhi lithokomele ukubeka. Umklamo oqediwe ngokuhlobisa okumangalisayo, ungaba ugqozi lwakho ngokuhlobisa indlu yakho. Idizayini enemininingwane izokhombisa ngokuphelele kule webhusayithi. Hhayi ingxenye yendlu kuphela kodwa futhi lonke igumbi elinemihlobiso. Isibonelo, ukwakhiwa kwekamelo lokulala kufakwe embhedeni wasentwasahlobo, imicamelo, amabhulukwe, ifenisha, isibani sokulala nodonga lokuhlobisa nodonga. Ngezinketho eziningi zokuklama kanye nemibono yokwakheka, kwenza kube lula futhi kungathathwa ekucabangeni kwakho ukukhetha ukwakheka nemibala efanele indlu yakho.